पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वास्थअवस्था सामान्य, उपचारमा संलग्न चिकित्सक यसो भन्छन् (भिडियो सहित) - HAMRO YATRA
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वास्थअवस्था सामान्य, उपचारमा संलग्न चिकित्सक यसो भन्छन् (भिडियो सहित)
काठमाडौं, ४ साउन । मुटुमा समस्या देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।
नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा नर्भिक अस्पताल पुगेका पूर्व राजाको शाहको मुटको भल्बमा ब्लक भएको देखिएपछि डाक्टरको टोलीले थप उचार गरेको हो । चार जना डाक्टरको टोली उनको उपचारमा संलग्न भएको छ । डा. यादवप्रसाद भट्ट, डा. केशव बुढाथोकी, डा. नग्मा श्रेष्ठ र डा. शेखरराज भण्डारीको टोली उपचारमा संलग्न छन् ।
आगामी हप्ता बैंकक जान लागेका पूर्व राजा शाह आज बिहान नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नर्भिक पुगेका थिए । स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा उनको मुटुको मुख्य नसामा रगत ८०–८५ प्रतिशत ब्लक भएको पाइएपछि उपचारमा संलग्न टोलीले एन्जियोग्राफीगरी ४५ मिनेटमै ‘एन्जियो प्लास्ट’ गरेको थियो । एन्जियो प्लाष्ट भनेको रगत सहज रुपमा पास गराउने उपकरण हो । एन्जियोप्लास्ट हात, तिघ्राबाट गर्ने गरिन्छ ।
एन्जियोप्लास्ट गरीसकेपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था नर्मल रहेको २–३ दिनमा डिस्चार्ज गरिने अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । यस अघि पूर्व राजा शाहाको सन २०१४ सेप्टरम्बर १४ मा पहिलो पटक एन्जियोप्लास्ट गरिएको थियो । यस अघि हृदयघात भएपछि एन्जियोप्लास्ट गरिएको थियो भने अहिले नियमित चेकअपकै बेलामा यस्तो देखिए पछि एन्जियोप्लास्ट गरिएको हो । अहिले समयमै थाहा भएको हुँदा पूर्व राजा शाह ठूलो खतराबाट जोगिनुभएको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुले बताएका छन् ।
पूर्वराजा शाहलाई यस्तो खाले समस्या देखिनुलाई चिकित्सकहरुले वंशानुगत गुण भएको बताएका छन् । त्यस्तै मुटुसम्बन्धी गरिने उपचारका लागि चाहिने ९० प्रतिशत उपकरणहरु अस्पतालमा रहेको र हृदयघातसम्बीन्धी समस्या देखिएमा जतिसक्दो चाडो उपचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्तो बेलामा अरुको परामर्शभन्दा राम्रो डक्टर हेरेर उपचार गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टरले यसो भने...